Ngwa mkpuchi ụgbọ ala ala | Gam akporosis
Car mkpuchi ngwa ọdịnala ala
Miguel Gaton | | Ngwa gam akporo
Nsogbu coronavirus na ọnọdụ dị ugbu a kpatara a osooso na digitization nke ụlọ ọrụ, ulo oru na ulo ahia. Ọ bụ ezie na anyị chere na ihe niile adịlarịrị dijitalụ, a ka nwere ndị ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere ndoputa ọzọ mgbe ọ bịara ịbanye na ịntanetị. Eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ndị dị ka nyiwe mkpuchi dijitalụ na-etinye aka na ihe ọhụrụ ka bụ ozi ọma, ebe ọ bụ na ịnye ego mkpuchi bụ ọrụ a na-eme na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ga-emerịrị.
doppo bụ otu n'ime nyiwe dijitalụ ndị a nke mejupụtara digitization ya, na-enye a ngwa nke na-enye ohere njikwa mkpuchi ngwa ngwa ma dị mfe, site na ekwentị mkpanaaka, na ndị ahịa gị. Nke a pụtara na, ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere doppo online mkpuchi zuru oke, ị nwere ike rue na ụbọchị na-enweghị na-ahapụ sofa.
1 Uru nke ihe ọhụrụ a na mkpuchi ụgbọ ala
2 Etu esi enweta ngwa ndị a?
Uru nke ihe ọhụrụ a na mkpuchi ụgbọ ala
O doro anya na ọtụtụ n'ime anyị ga-enwerịrị ma ọ bụ mezuo usoro metụtara mkpuchi anyị, ma ọ bụ mgbanwe nke data nkeonwe, kọọ ụfọdụ akụkụ nke ịza, mgbanwe mkpuchi, wdg Nchịkwa n'ịntanetị nke usoro ndị a na-eme ka ha ghara ịdị na-agwụ ike.
Inwe ngwa maka oru ubochi abughi nani ihe bara uru n'ihi na odi mfe. Ichekwa nwa oge dị mkpa ebe ọ bụ na anyị agaghị aga ụlọ ọrụ ihu na ihu maka mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla anyị chọrọ na mkpuchi anyị. Tụkwasị na nke a, na-eburu n'uche ọnọdụ enweghị atụ anyị bi na ya, izere ebe a na-akwaga ebe ọzọ bụ omume na-enyere ọha mmadụ aka ma na-egbochi anyị ịrịa ọrịa.
Na nke a anyị ga-agbakwunye ụgwọ gburugburu ebe obibi. N'ezie, anyị anaghị agagharị ma ọ bụ na-akwagharị, mana anyị anaghị eji ọtụtụ puku akwụkwọ iji mezuo usoro ma ọ bụ nkwekọrịta. You nwere ike ịrịọ maka ihe ndị ọzọ?
Etu esi enweta ngwa ndị a?
Dị mfe! Dị ka ọ bụla ọzọ, site na ndepụta nhọrọ ọ na-enye Google Play maka ndị ọrụ gam akporo ma ọ bụ site na Storelọ Ahịa App maka ndị hụrụ apụl n'anya. Facilitieslọ ọrụ niile maka ndị ọkachamara kachasị mara ọrụ na ndị mbido. Ọ dịbeghị mgbe ụlọ ọrụ mkpuchi ahụ nwere ohere ịnweta ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Car mkpuchi ngwa ọdịnala ala
Etu esi egbochi ozi na Instagram
Huawei Y7a gosipụtara Kirin 710A na 22,5W ngwa ngwa